आजदेखि एक साता लकडाउन : के गर्न मिल्छ, के गर्न मिल्दैन ? – Sajha Bisaunee
आजदेखि एक साता लकडाउन : के गर्न मिल्छ, के गर्न मिल्दैन ?
। ११ चैत्र २०७६, मंगलवार ०१:३८ मा प्रकाशित
सुर्खेत : सरकारले आजदेखि अत्यावश्यकबाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस(कोभीड–१९) को संक्रमण फैलिन नदिन संक्रामक रोग ऐन २०२० को व्यवस्थाअनुसार मंगलबार बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ गते विहान ६ बजेसम्म कुनै पनि व्यक्ति घर बाहिर निस्कन नमिल्ने गरी ‘लकडाउन’ गरिएको हो ।
यो निर्णयसँगै आजदेखि औषधि उपचार र अत्यावश्यकबाहेक कुनै पनि व्यक्ति घर बाहिर निस्कन पाउने छैनन् ।
स्पताल, सुरक्षाकर्मी तथा अत्यावश्यकबाहेक कुनै पनि सवारी साधन समेत सञ्चालन हुने छैनन् । औषधि, खाद्यवस्तु, दूध र इन्धन जस्ता अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य उद्योग कलकारखाना बन्द भएका छन् ।
लकडाउन गर्नुको अर्थ अत्यावश्यकबाहेक सबै कार्यमा रोक लगाउनु हो । कोरोनाको महामारी नफैलियोस भन्नका लागि नेपालमा लकडाउन गरिएको छ ।
यसअघि कोरोना संक्रमणको जोखिममा भएका अन्य देशहरुले पनि लकडाउन गरेका थिए ।
आजदेखि सुरक्षाकर्मीहरुले विशेष निगरानी गर्दैछन् । मानिसको भीडभाडलाई कम गर्नु नै लकडाउनको मुख्य उद्देश्य हो । यसलाई ‘नागरिक कफ्र्यु’का रुपमा पनि व्याख्या गर्ने गरिएको छ । किनभने यो एक प्रकारको कफ्र्यु जस्तै हो । कफ्र्यु निश्चित समयका लागि हुन्छ भने लकडाउनको समय रोग अनुसार हुने गर्दछ । तर नेपालमा अहिले एक साताका लागि अर्थात चैत १८ गतेसम्मका लागि लकडाउन गरिएको छ ।
बजार, व्यवहार, होटल तथा रेष्टुरेण्ट, बैंक लगायत मानिसको भीडभाड हुने सबै ठाउँ बन्द हुन्छ । मानिसहरु घरबाट आवत–जावत गर्न पाउँदैनन् । त्यसैले आवश्यक सावधानि अपनाएर घरभित्रै बस्न सरकारले नागरिकलाई आग्रह गरेको छ ।